Igumbi lokulala le-Finca Drago 3
La Orotava, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, i-Spain
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Ana
Lesi sakhiwo esingamamitha ayi-8,000 singesinye sezibonelo ezimbalwa ezisele kusukela eminyakeni ebabazekayo iTenerife eyayazi ngenkathi isiqhingi siyipharadesi elaziwa abambalwa baseYurophu kuphela. I-'finca' inokubukwa okuhle kwe-Teide, ulwandle kanye ne-Oratava Valley. Isimo sakhona sihle kakhulu uma ungahambela ezinye izingxenye zesiqhingi njengoba iseduze nomgwaqo kodwa imizuzu embalwa ukusuka ogwini nasenkabeni yePuerto de la Cruz. Eduze kwe-finca kutholakala enye yezindawo zokudlela ezihamba phambili endaweni.
I-'finca' inokubukwa okuhle kwe-Teide, ulwandle kanye ne-Oratava Valley. Isimo sakhona sihle kakhulu uma ungahambela ezinye izingxenye zesiqhingi njengoba iseduze nomgwaqo kodwa imizuzu embalwa ukusuka ogwini nasenkabeni yePuerto de la Cruz. Eduze kwe-finca kutholakala enye yezindawo zokudlela ezihamba phambili endaweni. Nakuba imvelaphi ye-finca iqala ngekhulu le-XV1, indlu ngokwayo ihlehlela ekuqaleni kwekhulu lama-XX. Yindlu enhle enamakamelo amakhulu anakekelwe ngokucophelela. Ikakhulukazi ifenisha yendabuko. Izingadi zasezindaweni ezishisayo ziyisici esikhethekile esinamakhona abukekayo nangasese lapho umuntu engakhululeka khona ngencwadi noma abuke ubuhle bendawo. Kubantu abanomdlandla kakhulu kunenkundla yethenisi enama-racquets ethenisi atholakala mahhala, indawo yokubhukuda, i-sauna, konke okugcwele uhlaza olunezihlahla zezithelo. Lezi zinsiza zabiwe phakathi kwezindlu ezi-5. Le ndlu ebanzi inweba ngaphezu kwamasitezi amabili futhi ifinyelela kuthala ophahleni. Jabulela ukudla etafuleni elide lesidlo sakusihlwa esitezi esiphansi, noma kuvulandi ongaphandle phambi kwekhishi. Ikamelo lokulala elikhulu elinamafasitela esikrini esibanzi liyikamelo lokulala elikhethekile kakhulu lendlu - kungase kudingeke uphonsa uhlamvu lwemali. Ukuze ushise ilanga ngasese sebenzisa ithala elincane elisophahleni. Kusukela ophahleni lwenkundla jabulela ukubuka okumangazayo okungu-360° phezu kwesigodi sase-Orotava noLwandlekazi i-Atlantic.
Iphuzu elingcono kakhulu lale ndlu yisimo sayo, Sincoma imoto, kodwa isevisi yebhasi lapha ishibhile futhi ifika ngesikhathi. Imibono eya eTeide iyona engcono kunazo zonke esigodini, njengoba ungabona zonke izintaba kusukela olwandle kuya endaweni ephakeme kakhulu yesigodi sase-Orotava. Ukuba nephuli ESHISAYO (24ºC) nakho kuyinzuzo enkulu, njengoba amachibi ashisayo engavamile ukutholakala. Ngicela ungibuze yonke imibuzo yakho, sikhona ukukusiza.
Hlola ezinye izinketho ezise- La Orotava namaphethelo